Vaovao - 2020, ny vidin'ny tsenan'ny vy any Shina dia hidina aloha ary hiakatra, miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy fiakarana lehibe
2020, ny vidin'ny tsena vy any Shina dia hidina aloha ary hiakatra, miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakarana
Amin'ny taona 2020, ny vidin'ny tsena vy any Shina dia hidina aloha ary hiakatra, miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro sy fiakarana lehibe. Amin'ny 10 Novambra 2020, ny index compite vidin'ny vy vita amin'ny vy dia ho 155.5 isa, fiakarana 7,08% raha oharina amin'ny fe-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Niakatra ny ivon'ny hery misintona.
Hihamafy ny filan'ny mpanjifa. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, nihatsara hatrany ny fihodinan'ny firenena, ny fiakaran'ny harinkarena dia nampiseho fiverenana miendrika V, ary ny fampiasam-bola marin-toerana dia nanjary fifantohan'ny fanitsiana mifanohitra amin'ny bisikileta. Tombanana fa ny fangatahana vy vy (anisan'izany ny fanondranana vy mivantana) dia hitsambikina hatramin'ny haavon'ny 1 miliara taonina, mahatsapa fiakarana vaovao eo amin'ny tantara.
Niakatra be ny vidin-tsolika fanorana. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, noho ny anton-javatra isan-karazany, ny vidin'ny akora fanaovan-vy toy ny vy sy ny coke dia nisondrotra tampoka nanerana ny firenena, nanosika ny vidin'ny famokarana vy ary namorona ny fanohanan'ny vidiny matanjaka.
Ny fihenan'ny sandan'ny fifanakalozana dolara amerikana. Amin'ny taona 2020, miovaova ny vidin'ny vy eo amin'ny firenena, ary ny fihenan'ny sandan'ny dolara amerikana koa dia zava-dehibe. Ny fihenan'ny dolara amerikana dia hampisondrotra ny vidin'ny fanafarana ireo akora sy vy vita amin'ny fandrendrika hafarana, ary hampiakatra ny vidin'ny vy any an-toerana arak'izany.
Amin'ny taona 2020, hiovaova sy hiakatra ny vidin'ny vy any Sina, voalohany indrindra dia hihamafy ny filan'ny mpanjifa. Nanomboka tamin'ity taona ity, ny ekonomika nasionaly dia nihatsara hatrany, ny tahan'ny fitomboana ara-toekarena dia nivadika fihodinana V, ary ny fampiasam-bola marin-toerana dia nanjary fifantohan'ny fanitsiana ny tsingerina mifanohitra. Vokatr'izany, hitombo ny hamafin'ny fanjifana vy any Shina fa tsy hihena amin'ny taona 2020. Indrindra aorian'ny nidirana tamin'ny tapany faharoa amin'ny taona, vao mainka hihamafy ny fangatahan'ny vy nasionaly Raha ny antontan'isa, hatramin'ny volana janoary ka hatramin'ny septambra tamin'ity taona ity, ny fihinanana sinoa mihoapampana nataon'i China. ny vy dia 754,94 tapitrisa taonina, fiakarana 7,2% isan-taona. Anisan'izany, ny tahan'ny fitomboana tamin'ny volana jolay dia 16,8%, fa ny volana aogositra dia 13,4%, ary ny volana septambra dia 15,8%, mampiseho ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitomboan'ny vy (anisan'izany ny fanondranana vy mivantana) dia hitsambikina hatramin'ny 1 miliara taonina. eo amin'ny tantara